Ny Ben’ny tanàna amperin’asa Kolo Frijof no atolotry ny vovonana IRD ho kandida Ben’ny tanàna eto amin’ny Kaominina ambonivohitra Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe. (Jereo Sary Tohiny)
« Rehefa nandinika, namakafaka ary nahatsapa ny olana misy amin'ny fametrahana ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny fanakatsakanana ny fisian'ny mpanohitra tena izy, mifanaraka amin'ny safidin'ny vahoaka sy ara-dalàna ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM), dia manolotra ny filoha Marc Ravalomanana ho kandida Ben'ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra ». Alain Andriamiseza, filohan’ny antoko MCDM no nanao ny fanambarana androany tetsy amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina, notronin’ireo filohan’antoko samihafa mandrafitra ny vovonana RMDM.
Mihisatra ny fanaterana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon’ny OVEC manerana ny Nosy. Raha ny omaly hariva dia Kaominina miisa 81 amin’ny 1695 no misy mpirotsaka ho fidiana, ka kandida tsy miankina ny 75 amin’ireo. Nanentana ireo antoko sy vondrona antoko ny Vaomiera mahaleotena momba ny fifidianana na CENI, tamin’ny alalan’ny mpampakateny ankapobeny Razafindraibe Ernest, mba tsy hiandry ny fotoana farany ny 12 septambra 2019, amin’ny 5 ora hariva, hikatonan’ny fandraisana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana eny anivon’ny OVEC, sao misy tsy fahampiana dosie ka ho tara na mety hitarika tsy fahafaha-mifaninana amin’ny fifidianana.
lundi, 09 septembre 2019 16:51
Fifidianana amin’ny 27 novambra 2019: Mizotra araka ny tetiandro napetraka ny fanomanana, hoy ny CENI
Nitarika fivoriana niarahan’ny governemanta sy ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny Fifidianana (CENI) ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany 09 septambra 2019 maraina, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo. Fivoriana izay nijerena akaiky ny fizotry ny fanomanana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna, hotanterahina ny 27 novambra 2019 ho avy izao, mba hahafahana mahafantatra izay olana mety hiteraka tsy fahatomombanana, ary mitondra vahaolana mifandraika amin’izany. Nanambara ny Praiminisitra fa hifarana ao anatin’ny telo andro ny fotoam-pametrahana ny antontan-taratasy firotsahana hofidiana ary mizotra ara-dalàna ny fikarakarana rehetra, izay azo lazaina fa milamina amin’ny ankapobeny, na eo amin’ny lafiny fikirakirana ny fitaovana izany, na eo amin’ny lafiny tetibola. Nojerena ihany koa ny andraikitry ny tetikasa “SACEM” izay nanohana tamin’ny fifidianana hatramin’izay, hoy ny Praiminisitra.
lundi, 09 septembre 2019 16:47
Mahajanga: Sahirana ny mpirotsaka ho fidiana amin’ny fakana « bulletin n°3 » amin’ny Fitsarana
Fanirian’ireo maniry hirotsaka hofidiana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina ny hisian’ny mpiandry raharaha eny amin’ny Tribonaly amin’ny fakana « casier judiciaire », toy ny eny amin’ny CED sy Ivon-ketra amin’ny fakana antontan-taratasy hamenoana ny firotsahan-kofidiana. Toy ny amin’ny faritra maro dia mampitaraina ireo mpirotsaka ho fidiana ny fakana io « bulletin n°3 » eny amin’ny Fitsarana io, fa sady mandany fotoana no mampivezivezy, misy aza maka vola mihitsy.
Mandalo fotoan-tsarotra ny fitondran’ny praimisitra Boris Johnson, taorian’ny fikasan’ity farany hiala an-jolofo ao amin’ny Vondrona Eoropeana tsy misy fifanarahana. Minisitra roa sahady izao nametra-pialana sady niala tsy mpikambana ao amin’ny antoko « Conservateur » tamin’ity herinandro ity. Teo i Joseph Edmund Johnson na Jo Johnson, izay zandriny lahy, minisi-panjakana misahana ny raharaha, angovo sy ny stratejia, narahin’ny fametraham-pialan’i Amber Rudd, minisitry ny asa sy ny fisotroan-dronono. (Jereo Sary Tohiny)
Hatramin’ny androany, tsy mbola nisy nametraka antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna teny amin’ny OVEC Toamasina I. Raha ny omaly, dia Kaominina miisa 27 amin’ny 1695 no mbola nisy nametraka antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna manerana ny nosy.
Masoivoho vahiny, mpikambana tao anatin'ny andrimpan-jakana samihafa, mpanao politika, mpitondra fivavahana, fikambanana isan-tokony, fiarahamonim-pirenena sivily sy miaramila maro no nasain'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina hiaona tamin'ny Papa Fransoa io marainan'ny asabotsy 07 septambra io, teny amin'ny Lapa-panjakana Iavoloha. Nisy moa ny hazo niarahan'ny roa tonta namboly ho fahatsiarovana izao fitsidihana ataon'ny Papa eto Madagasikara izao. (Jereo Sary Tohiny)
Ny taona 2017 no nankalazana ny faha-50 taonan'ny fifandraisana diplomatika teo amin'i Madagasikara sy Vatican. Amin’ny maha filoham-panjakana ny Papa Ray Masina Fransoa dia hihaona amin’ireo filohan’ny andrim-panjakana, ny fiaraha-monim-pirenena ary ireo masoivoho eto amintsika eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany ny marainan’ity sabotsy 7 septambra 2019 ity. Aorian’izay dia hitsidika an-dry masera karmelita eo Ampasanimalo i Papa Fransoa, sady mamarana ny fandaharam-potoanany ny tapakandro maraina. Ny tolakandro dia hisy ny fihaonany amin'ireo Evekan'i Madagasikara eny amin'ny Katedraly Andohalo, hiarahaba azy eny koa ny FFKM. Aorian'izay dia hitsidika ny Chapelle misy ny fasan'ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo izy. Hamarana ny fandaharam-potoanany anio ny fiarahany manao alim-bavaka miaraka amin'ny Tanora eny Soamandrakizay.
Sary: KMP Penjy
Tonga nanatitra ny taratasy firotsahan-kofidiany ho Ben'ny tanànan’i Ivato, tetsy amin'ny OVEC Ambohidratrimo androany misandratr’andro i Penjy Randrianarisoa ; notronin'ireo mpiara-dia aminy. Ben’ny tanàna amperinasa i Penjy Randrianarisoa. Firotsahan-kofidiana faharoa ny azy izao. Kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara eny amin’ny Kaominina Ivato, vavahadin’i Madagasikara izy.